Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Empire State Building All Decked Out for the Holide
Iholide yeHolide iguquguquka ngokupheleleyo kwi-Empire State Building (ESB) njengoko uphawu oluphawulekayo lutyhila abathengisi bendawo abaphumayo, imihombiso engaphezulu, kunye nezicwangciso zemidlalo yomculo ekupheleni konyaka.
Ukusukela namhlanje, iifestile zesakhiwo seFifth Avenue Lobby zihonjiswe ngemiboniso yeeholide ebonisa igolide, ukumenyezela, kunye neendawo zeelekese ukuhlonipha elona xesha limnandi lonyaka. Iifestile ezimangalisayo zinconywa ngophawu oluphawulweyo, izibane zeeholide ze-Art Deco, izithsaba, kunye nomthi weKrisimesi ophakamileyo. Iindwendwe ezidlula kwiFifth Avenue Lobby ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu nazo ziyakubuliswa ziingoma zeeholide ezidlalwa ziincutshe zepiyano ukusuka ngentsimbi yesi-8 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-7 ngokuhlwa.
“Ulonwabo lwexesha leeholide lunokuvakala kuzo zonke iikona zamava ethu acingelwe ngokutsha, ukusuka kwimihombiso eyothusayo ukuya kubathengisi bethu beholide,” utshilo uJean-Yves Ghazi, umongameli we-Empire State Building Observatory. "Siyavuya ukwamkela iindwendwe kumava okwenene, omlingo ngelona xesha limnandi lonyaka."
Rhoqo ngeempelaveki ukuya ekupheleni kukaNovemba, i-Empire State Building iya kuthengisa utywala obukhethekileyo - kubandakanywa neyakhe i-"View From the Top" i-Hazy IPA ethengiswa ngokukodwa kwi-86th Floor Observatory - ngokubambisana neCraft + Carry kunye ne-Five Boroughs Brewing Co. ka-Dec. 2, DŌ, Cookie Dough Confections, i-NYC-based cookie intlama etyiwayo kunye nenkampani yecookie, iya kuthatha i-86th Floor njengomthengisi we-pop-up kaDisemba. I-DŌ iya kubonelela ngeeholide ezintandathu kunye ne-NYC-themed ephathwayo ukusuka kwinqwelo ekhethekileyo ye-90th Anniversary kwiimpelaveki ezintathu zokuqala ngoDisemba.
Isigebenga se-menorah sibulisa iindwendwe njengoko bengena kwi-Empire State Building Observatory Experience, kunye nethuba lefoto yeholide kwikona ekuMntla-mpuma we-86th Floor Observatory ikwavumela iindwendwe ukuba zithathe imifanekiso yazo yeeholide zonyaka ngeyona nto ibonakalayo, imvelaphi ye-NYC eyinyani. Imihombiso iya kuhlala ibonisiwe kwi-lobby nakuwo wonke amava eObservatory ukuya nge-6 kaJan.
I-Empire State Building Observatory Experience yafumana i-165 yezigidi zeedola, i-top-to-down reimagination, eyagqitywa ngoDisemba 2019. Ukulungiswa kubandakanya ukungena kweendwendwe ezizinikeleyo, imyuziyam entywilayo kunye nemiboniso yedijithali kunye ne-tactile, kunye ne-102nd Floor Observatory ecingwe ngokupheleleyo. Iindwendwe ziyaxhamla kuphuculo oluhamba phambili kushishino lwemo engqongileyo yangaphakathi (IEQ) - njenge MERV 13 izihluzo kunye ne-bi-polarization esebenzayo - ukwenzela ukuzithemba kweendwendwe. I-86th Floor Observatory ilungiswe ngezibane ezisanda kufakwa, ubushushu obuvuliweyo ukugcina iindwendwe zifudumele ngelixa bonwabele ubumenyememe obuvela kumbindi weSixeko saseNew York.
Izibane zenqaba ezidumileyo zesakhiwo ziya kukhanya kulo lonke ixesha leeholide kunye nezibane ezikhethekileyo zoMbulelo, iChanukah, iKrisimesi kunye noNyaka oMtsha.